सुुविसुु क्यान सफ्टेक २०१४ मा विभिन्न कम्पनीको अफर - Technology Khabar
» सुुविसुु क्यान सफ्टेक २०१४ मा विभिन्न कम्पनीको अफर
सुुविसुु क्यान सफ्टेक २०१४ मा विभिन्न कम्पनीको अफर
Technology Khabar २२ भाद्र २०७१, आईतवार
काठमाडौं, २२ भदौ । सुुविसुु क्यान सफ्टेक २०१४ इन एशोसियसन विथ नियो ईआरपी मा विभिन्न कम्पनीहरुले फरक फरक आकर्षक अफरहरु ल्याउने भएको छन् । कम्प्युुटर एशोसियसन अफ नेपाल (क्यान) ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिईयो । क्यान सफ्टेक २०१४ मा सुुबिसुु केवल नेटले ग्राहकहरुको लागि विषेश अफरका योजना सहित सफ्टेक प्रस्तुुत हुुंदैछ । जस अन्तर्गत सुुविसुको ईन्टरनेट तथा केवल टी भि जडान गर्न खोज्ने नयां ग्राहकको लागी विषेश छुुटको व्यबस्था गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विषेश स्कीम सहितको रिम तथा सिम कार्ड लगायतका अफरहरु लिएर आउंदैछ ।
त्यसैगरी ईरासफ्ट सोलुुसनस्ले अनवर स्मार्ट ट्याक्सीले मोबाईलको सहायताले चलाउन सकिने अत्याधुुनिक एप्लिकेसनको निर्माण गरेको छ । ईजोन ईन्टरनेशनलले प्रथम नेपाली Cloud ERP मुुल्य रु (५०,००० देखी ५०,००,०००) सम्ममा उपलव्ध गराउने भएको छ । मिदास एजुुकेशनले प्रदर्शनको अवसर पारेर एन्ड्रोइड ट्याबलेट,मोबाईल तथा ल्यापटप खरीद गर्ने तथा उक्त प्रर्दशनीमा लिएर आउने व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क रुपमा रु.४०० बराबरको ई–लर्निङ्ग एप्लिकेशन प्रदान गर्ने भएको छ । अन्य कम्पनीहरुले पनि विभिन्न अफरहरु दिने जानकारी दिईयो ।
सफ्टेकमा १४२ वटा स्टलहरु रहेका छन् । जसमा सफ्टवेयरको क्षेत्रमा शिक्षा, कम्प्यूूटर सुुरक्षा, बैंकिङ्ग, सूूचना व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, एन्टिभाईरस र अस्पताल व्यबस्थापन लगायतका सफ्टवेयरहरु रहेका छन् भने सेवा सम्बन्धि क्षेत्रमा, ईन्टरनेट सेवा, केबल तथा डिस टेलिभिजन सम्बन्धि सेवा त्यस्तै सोलुुशनको क्षेत्रमा सेक्युुरिटी सोलुुशनस्, वायसलेश सोलुुशनस्, प्रिन्टिङ्गस् सोलुुसनस्, पावर सोलुुसनस्, र विभिन्न एप्लीकेशन सहितका ट्यावलेटहरु संग सम्बन्धित स्टलहरु रहेका छन् । साथै कम्प्यूूटर र सूुचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस पटक देखि स्मार्ट मोबाइल र ल्यापटप सहितका स्टलहरु थप गरिएका छन् ।
अवलोकनको लागि सर्व साधारणहरु लाई प्रवेश शुुल्क रु ५० र विद्यार्थीहरु लाई रु २५ तोकिएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई सूूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनीको अनलाईन टिकट खरिदको व्यवस्था मिलाईएको छ । यो सेवा can.org.np मा लग अन गरी खरीद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ । प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य अनुुरुप अनलाईन टिकट खरीदमा २० प्रतिशत छुुटको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । त्यसैगरी सुुविसुु क्यान सफटेक २०१४ को टिकट खरीदको व्यवस्था उपत्यकाभरी रहेका ई सेवा जोनहरु बाट पनि ई सेवासंगको सहकार्यबाट गरिएको हो । कलेज तथा स्कुुलका विद्यार्थीहरु सम्बन्धीत कलेज तथा स्कुुलको पत्र सहित आएमा टिकट दरमा विषेश छुुट प्रदान गरिने छ । सामुुदायिक विद्यालयका विद्यार्थाीहरुको सम्बन्धमा स्कुुलको पत्र सहित आएमा निःशुुल्क प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
कार्यक्रममा यस क्षेत्रसंग सम्बन्धीत विभिन्न विषयमा सेमिनार कार्यक्रम समेत आयोजना गरिने भएको छ । SQA Enthusiast संगको सहकार्यमा एक दिवसिय “Seminar on web security” विषयक सेमिनार कार्यक्रम गरिने छ । त्यसैगरी Green IT Solutions संगको सहकार्यमा एक दिवसिय Virtualization सम्बन्धि कार्यशाला समेत आयोजना गरिने छ ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७१, आईतवार
गूगलले बन्द गर्यो आकस्मिक लोकेसन शेयर गर्ने ट्रस्टेड कन्ट्याक्ट्स एप
टिकटकसहित ५९ चिनियाँ एपहरु भारतमा प्रतिबन्ध लगाएको बारेमा यस्तो भन्यो चीनले
१७ असार २०७७, बुधबार
पबजी खेल्न रोक्दा भारतमा १७ वर्षीय किशोरद्वारा आत्महत्या
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार
ह्वावेले मोबाइलका लागि हार्मोनी ओएसको बीटा भर्सन डिसेम्बर १८मा ल्याउने
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार
राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले तयार पारेको सरकारी भिडियो कन्फ्रेन्सिङ्ग टूल प्रयोग गर्न सांसदको माग
फेसबुक मेसेन्जरमा अब आफ्नो मोबाइल वा डेस्कटपको स्क्रिन शेयर गर्न सकिने
३ श्रावण २०७७, शनिबार
नेपाल टेलिकमको तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा चैत १३ गते शुक्रबार हुँदै
स्पेसएक्सको रकेटमा चन्द्रमामा जाने हो? जापानी अर्बपतिको छनोटमा तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ!
हेर्नुस् नासाको पर्सिभेरन्स रोभरले पठाएको मङ्गल ग्रहको रोमान्चक तस्विरहरु
यी हुन् साइबर सेक्युरिटी र क्लाउड अडिट गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानेका फर्महरु